रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको जग बलियो छ : रेणु शाह – Google pati
रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको जग बलियो छ : रेणु शाह
२ माघ २०७५ ११:४९
रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको प्रमोटेड संस्थाहरु कुनकुन हुन् ?
यो सिदार्थ बैंक लिमिटेड दारा प्रमोटेड संस्था हो । साथै यसकाअरु प्रमोटेड संस्याहरु पनि छन् । महेन्द्र टु विलर्स, अग्नि ग्रुप, ब्रिज सिमेन्ट, सिदार्थ क्यापिटल, केडिया अर्गनाइजेसन र आगन हाम्रो मेजर प्रमोटेड संस्थाहरु हुन् ।
यसका प्रमुखहरु कोको छन् त ?
केन्द्रिय चेयर पर्सन ताराचन केडिया, सिइओ प्रविण रमण पराजुली, डिसिओ निराजन कँडेल हुनुहुन्छ ।
तपाईहरुको जारी पुँजि र चुक्ता पुँजि कति कति छन् ?
हाम्रो चुक्ता पुँजि १ अर्ब ४७ करोड हो भने २ अर्ब १० करोड रुपैँया जारी पुँजि हो । निकट भविष्यमा ६३ करोड शेयर निकाल्ने योजनामा छौँ ।
रिलायन्सका शाखाहरु कुनकुन प्रदेशमा र कतिवटा छन् ?
हाम्रो केन्द्रिय कार्यलय काठमाण्डौँ नयाँ बानेश्वर स्थित कृष्ण टावरमा छ । सातैवटा प्रदेशमा ६४ वटा शाखाहरु विस्तार भैसकेका छन् । छिटै नै ७१ वटा शाखा पु¥र्याउने तयारीमा लागि परेका छौँ ।
तपाइहरुले कुन कुन विषयमा बिमा गराउदै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो निर्जिव बिमा बाहेक रिलायन्स शान्ति जिवन बिमा योजना, रिलायन्स सुखमय जिवन बिमा योजना, मेरो मुटु, बाल जिबन बिमा योजना, अनन्त माया असिमित सुरक्षा, धन फिर्ता बिमा योजना, सुरक्षित जिवन योजना लगायतका विषयहरु छन् ।
मेडिकल रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो ?
१८ वटा प्राण घातक रोगहरुको उपचारमा सहज होस भन्ने उदेश्यले मेडिकल रिक्वायरमेन्टको योजना ल्याएका हौँ । यो योजनालाई धेरैले मनपराउनु भएको छ ।
तपाईहरुका्े इन्सुरेन्स शुरु भएको कति भयो ?
यो संस्था शुुरु भएको लगभग डेढ वर्ष भयो ।
हेटौँडामा अहिले सम्म कतिजनाले जिवन बिमा गर्नुभएको छ ?
करीब २ सय जनाले अहिले सम्म जिवन बिमा गराउनु भएको छ ।
एकताका फाइनान्स कम्पनीहरु खुल्ने र बन्द हुने क्रम निकै भयो बैंकहरु पनि मर्ज हुने क्रम जारी छ
फइनान्स कम्पनी तथा बैंक जस्तै हराउने र मर्ज हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ? रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको जग बलियो छ । यसको प्रमोटेड संस्थाहरु बलिपयो भएकोले मर्ज हुने र हराउने चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छैन ।